ယဉ်ကြောရှင်းလင်းစေရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ယဉ်ကြောရှင်းလင်းစေရေး
Posted by မင်း ခန့် ကျော် on Apr 9, 2013 in Copy/Paste |9comments
ဒါထက်… မန္တလေးရုံးခွဲဖွင့်ရင် ရှယ်ယာပါမှာလားဟင်…
မန်းလေးမှာ ယာဉ်ကြောပိတ်လျှင် ရန်ကုန်မှာ ရုံးလာတက်ပါလား ….
ဘုရင့်နောင် ပွိုင့်ကို တခါဖြတ်ဖို့ အမြန်ဆုံးတောင် ပွိုင့်သုံးခါလောက်မိလောက်အောင် (မိနစ်20ခန့်) ယာဉ်ကြောပွင့်နေတာ …. ။ အိမ်မှာ အိပ်ရေးမ၀လည်း မပူနဲ့ …. ရုံးလာရင်း ကားစီးပြီး တရေးအိပ်လို့ ရတယ် …. ယာဉ်ပွတ်မှုဖြစ်လို့ .. လမ်းပိတ်သွားလျှင် အနည်းဆုံး2နာရီပဲ … ။
ဟီမနေ့ကပဲ အဝေးပြေးဂိတ်သွားတာ အိမ်ကညနေ ၅ နာရီခွဲထွက်တာ။ အောင်မင်္ဂလာကို ည ၇ နာရီကျော် မှရောက်ပါတီ။ ကားလဲလွတ်တွားတီ။ ဆင်မလိုက်မနေ အောင်မင်္ဂလာကို နှစ်နာရီနီးပါးမောင်းပါတီ။ ဖက်ဖက် ကက်ရေ ညီးကန်ထရိုက်ကိတ်စ အမြန်အကောင်ထည်ဖေါ်ဒေါ့အေ။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် စနေည ၉နာရီ MRTV မှာ Public Debate ဆိုပြီး ကိုကို (စက်မှုတက္ကသိုလ်) က တင်ဆက်သူအဖြစ် တင်ဆက်သွားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ယာဉ်ကြောပြဿနာ အဖြေရှာ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခု ကြည့်မိလိုက်တယ်။
အစအဆုံးကြည့်မိတာ မဟုတ်ပေမယ့် အဲဒီအကြောင်း သိသလောက်လေးကို အဆင်ပြေတဲ့အခါ ရေးချင်ပါသေးတယ်။
ကြည့်မိသူတွေ ရှိရင်လည်း ပြန်မျှဝေပေးကြစေချင်ပါတယ်။ :hee:
yangon ကိုတော့မသိဘူးဗျ။mdy မှာတော့ဘူတာကြီးကနေမြစ်ငယ်ထိ ၇ထားလမ်းတကြောလုံး
ခင်စောမူကွေ. အဲဒီမြောက်ဘက်စစ်တပ်ဝန်း ကညန၇ုံး တကသိုလ်ဝန်း လေယဉ်ကွင်းဟောင်း
မှန်ပါတယ်မပိတ်သင့်ပါဘူး။စည်းကမ်းမလိုက်နာတာကလည်းပါတယ်။စည်းကမ်းကိုသိအောင် နားလည်အောင် ထုတ်ဖို့လိုသလို ထုတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကိုလိုက်နာအောင်ကြပ်မတ်ဖို့လဲ